Haalawwan, himamsaawwan yaayabamoo, warra ati mul'annoo dirreewwan fi kutaawwan galmee kee keessaa to'achuudhaaf, fayyadamuu dandeessudha. Fakkeenyawwan itti aanan akkuma dirrewwaniif tahan, kutaawwaniifis ni tahu.
Akaakuuwwan dirree itti aananiif haalaawwan murteessuu ni dandeessa:
Barruu otoola: barruu A, yoo haalichi dhugaa tahe, yk barruu B, yoo haalichi soba tahe, mul'isa.
Barruu dhokataa: qabiiyyee dirrichaa, yoo haallichi dhugaa tahe, dhoksa.
Keewwata dhokataa: keewwaticha, yoo haalichi dhugaa tahe, dhoksa.
Rikoordii kaamiyyuu fi rikoordii ittaanaa: rikordiiwwan kuusadeetaa itii seenuu to'ata.
Karaa salphaan haala tokko ittiin murteessan, kallattiin sanduuqa Haala tokko keessatti, gatiiwwan itti aanan fayyadamuudhaan, himamsa yaayyaa barreesuudha.
Yammuu huunad'aa haalichii ni milka'aa. Akkasumas, gatii barbaadde isa 0 qixxee hin tanne akka barruu otoolatti galchuu nidandeessa.
Haalichii bakka hin geenyee. Akkasumas, gatii 0 galchuu nidandeessa.
Yoo sanduuqa Haalaa duwwaa dhiiste, haalichii akka bakka hin geenyetti fudhatamma.
Yammuu haalataa tokko qindeessituu, foormulaa tokko qindeessuufiis, wara maqaan saanii ogeejjiiwwan dorgii, dalagalee herregaa fi xiinannoon, dhangiiwwan lakkoofsaa, gegeedaramaawwan fi seranaawwan miseensa tokkicha faayadamiif.
Yammuu haalataa tokko qindeessituu, gegeedaramaa Akaakuu kanaan gaddiitti fayyadamuu nidandeessa:
Amaloowwan galmee irratti Gegeedaramaawwanii LibreOffice durmurtaawaa isa xiinannoo fayyadamuudhaa.
Gegeedaramaawwanii maamiloo, isa dirree "Gegeedaramaa Qindeessi" waliin uumame
Gegeedaramaawwan deetaa fayyadamaa irratti hundaa'an
Gegeedaramaawwan qabeentoota dirreewwan kuussa deetaa irratti hundaa'an
Himannoo haalaa keessatti, gegeedaramaawwan keessaa; kuniis, Lakkoofsa fuulaa fi boqonnaa fayyadamuu hindandeessu.
Haalataalee fi gegeedaramaawwan
Fakkeenyootii kanaan gaddii gegeedaramaa "x" jedhammu fayadammu:
x == 1 yk x EQ 1
Yoo "x" n, 1 waliin qixxee tahe, haaliichi dhuggaadha.
x != 1 yk x NEQ 1
Yoo "x" n, 1 waliin qixxee hintanee, haaliichi dhuggaadha.
Yoo "x" n, pi dhaan bayyataa tahe haaliichi dhuggaadha.
Ogeejjiiwwan dorgii diraa waliinii fayyadamuudhaaf, ogeejjamaawwan mallattoo waraabbii dachaadhaan daangeeffamuu qabu:
x == "ABC" yk x EQ "ABC"
Gegeedaramaa "x"n diraa "ABC" qabaachuu isaa (dhugaa), yk qabaachuu dhiisuu isaa (soba) addaan baafata.
x == "" yk x EQ ""
!x yk x MITI
Gegeeddaramaa "x" n dirra duwwa tokko qabaachuu isaa addaan baafata.
Ogeejjiin dorgii "wal-qixa" haala tokko keessatti mallattoo wal-qixaa lamaan (==) bakka buufamuu qaba. Fakkeenyaaf, yoo gegeeddaramaa "x" gatii isaa 1tti yoo murteessite, haalicha akka x==1 galchuu dandeessa.
Gabateen itti aanan, gegeeddarama deetaa fayyadamaa, akkasumas hiika sanii tarreessa:
Lakkoofsa bilbila daldala
Lakkoofsa bilbila manaa
Biyya (fooyya'ii LibreOffice mara keessatti miti)
Fakkeenyaaf, keewwata, barruu, yk qubduraa gooree fayyaadamaa irraa kutaa tokko, kan akka "LM", dhoksuuf, haalicha: qubduraawwan_fayyadamaa=="LM" galchi.
Haalaawwan fi Dirreewwan Kuusdeetaa
Haalawwan kuusdeetaatti seenuuf yk dirreewwan kuusdeetaa murteessuu nidandeessa. Fakkeenyaaf, qabiiyyee kuusdeetaa tokko haala tokko irraa mirkaneefachuu, yk dirreewwwan kuusdeetaa himamsawwan yayyaa keessatti fayyadamuu nidandeessa. Gabateen itti aanuu, kuusdeetaa haalawwan keessatti fayyadamuudhaaf, fakkeenya dabaalataa muraasa tarreessa:
Kuusadeetaa.Gabatee.Kuubbaaniyaa NEQ ""
Kuusadeetaa.Gabatee.Kuubbaaniyaa != ""
Haalichi, yoo dirreen COMPANY duwwaa hintaane, dhugaadha. (Fakkeenya jalqabaa keessatti, ogeejjiin hinbarbaachisu)
Kuusadeetaa.Gabatee.Kuubbaaniyaa EQ ""
Kuusdeetaa.Gabatee.Maqaaduraa AND Kuusdeetaa.Gabatee.Maqaa
DHUGAA, yoo rikoordiin maqaa duraa fi maqaa akaakayyuu qabaate, deebisa.
Addaddummaa buuliyaanii, NOT "!" fi ogeejjii dorgii, "!=" (NEQ)gidduu jiru yaadadhu.
Yeroo dirree kuusdeetaa haala tokko keessatti waabeffattu, unkaa Maqaakuusdeetaa.Maqaagabatee.Maqaadirree fayyadami. Maqaawwan kana keessaa tokko arfii ogeejjii tahe tokko kan akka mal'attoo mallaattoo hir'inaa (-) qabaate, maqicha golbee arfakkuu keessa kaa'i, fakkeenyaaf Maqaakuusdeetaa.[Maqaa-gabatee].Maqaadirree. Maqaawwan dirree keessatti edda, gonkumaa hinfayyadamin.
Fakkeenya: Dirree Kuusdeetaa Duwwaa tokko dhoksuu
Haala dirree duwwaa dhoksu tokko uumuuf barbaadduu malta, fakkeenyaaf, yoo dirreen COMPANY, rikoordiiwwan deetaa murtaawoo dhaaf, duwwaadha tahe.
Sanduuqa Hidden Paragraph filadhuutii, haala itti aanu barreessi condition: Addressbook.Addresses.Company EQ ""
yookiin isa itti aanu barreessi
Yoo kuusdeetaan dirree COMPANY duwwaa tahe, haalichi dhugaa tahee keewwatichi dhokataa taha.
Haalawwan Dirree keessaatiif fakkeenyawwan
Fakkeenyawwan warri itti aanan,yoo dirreewwan haala tokkotti qabsiifaman kamiyyuu irratti hojjisiifamani, dirree barruu otoolaa fayyadamu. Caasima inni haaloowwaniif fayyadu, akkasumas Barruu dhokataa, Keewwata dhokataa, Rikoordii kamiyyuu yk dirreewwan Rikoordii ittaanaadhaaf nifayyada.
Barruu otoola lakkoofsa fuulaawwanii tokko irratti hundaa'uun agarsiisuuf:
Saagi - Dirreewwan - Kabirroo filadhuutii, kana booda, caancala Dalagalee cuqaasi.
Tarree Akaakuu keessatti, "Barruu Otoolaa" cuqaasi.
Sanduuqa Otoola keessatti, "fuulaa == 1" barreessi.
Sanduuqa Kana Boodaa keessatti, "Fuulaa tokko qoofatttu jira" barreessi.
Sanduuqa Kana Booda keessatti, "Fuulaa tokko qoofatttu jira" barreessi.
Saagi cuqaasitii, kana booda Cuficuqaasi.
Jijjiirama hiika fayyadamaa irratti hundaa'uun barruu otoolaa agarsiissuu
Saagi - Dirreewwan - Kabirroo filadhuutii, kana booda, caancala Jijjiiramoota cuqaasi.
Tarree Akaakuu keessatti, "Jijjiirama Qindeessii" filadhu.
Sanduuqa Maqaa keessatti, "Bu'aa" barreessi.
Sanduuqa Gatii keessatti, "Bu'aa" barreessi.
Caancala Dalagalee cuqaasitii, kana booda, "Barruu Otoolaa" tarree Akaakuu keessaa cuqaasi.
Sanduuqa Otoola keessatti, "Bu'aa" barreessi.
Sanduuqa Kana Boodaa keessatti, "Galtiin quufssaa mitii" barreessi.
Sanduuqa Yookinii keessatti, "Galtiin quufssaa dhaa" barreessi.
Qabiiyyee kan gegeeddaramaa "Bu'aa" gulaaluudhaaf, dirree gegeeddaramaa lama-cuqaasi.
Barruu otoola qabeentoota dirree kuussa deetaa tokko irratti hundaa'uun agarsiisuuf:
Fakkeenyi kutaa jalqabaa iddoo dirreewwan galmee keessaa "Maqaa Jalqabaa" fi "Maqaa Abbaa" gidduu jiru yammuu saagu, fakkeenyi kutaa lamattaa immoo, barruu qabeentoota dirree tokko irratti hundaa'anii saaga. fakkeenyi hini kun maddii deetaa teessoo LibreOffice waliin galma'ee barbaada.
Saagi - Dirreewwan - Kabirroo filadhuutii, kana booda, caancala Kuusdeetaa cuqaasi.
Tarree Akaakuu keessaa, "Dirreewwan Makiinsa Ergannoo" cuqaasi.
Sanduqa Database selection keessaa, yaadannoo teessoo irra lama-cuqaasiitii, "Maqaa Jalqabaa" cuqaasi, kana booda, Saagicuqaasi. kanuma "Maqaa Abbaa" tiif irra deebi'i.
Galmicha keessaa, dirreewwan laman gidduu qaree ka'itii, kabalaa iddoo dhiibitii, kana booda, qaaqa Dirreewwanii tti deebi'i:
Sanduqa Haala keessatti, "Yaadannooteessoo.teessoolee.maqaajalqabaa" barreesssi:
Sanduqa Sanabooda, keessatti, iddoo tokko barreeessiitii, sanduuqa Yookinii duwwaa dhiisi.
Yeroo ammaa kana qabeentoota dirree Maqaa Jalqabaa irratti hundaa'uun, barruu galchuu dhaaf haala fayyadamuu nidandeessa.
Qaaqa Fields keessaa, caancala Dalagaalee cuqaasi.
Sanduqa Akaakuu keessaa, "Barruu otoola" cuqaasi.
Sanduqa Haala keessatti, kana barreesssi: Yaadannooteessoo.teessoolee.maqaajalqabaa == "Guddataa"
Sanduuqa Gatii keessatti, "Obbo" barreessi.
Sanduuqa Yoohintaanekeessatti, "Hello" barreessi.
Title is: Halottaa Qindeessi